Ny torolàlana CMO mahatsiravina 2014 ho an'ny fizahantany ara-tsosialy | Martech Zone
Ny torolàlana CMO mahatsiravina 2014 ho an'ny tontolon'ny fiarahamonina
Alarobia, Jolay 30, 2014 Alarobia, Jolay 30, 2014 Douglas Karr
Omaly, vitako ity lahatsoratra ity ary saika hanindry ny famoahana aho rehefa nandondona labiera tamin'ny solosainako. Manantena aho fa tsy ny karma no tonga handaka ny vodiko. Tafavoaka ihany ilay solosaina finday, saingy nanjavona ilay lahatsoratra bilaogy. Manoratra ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny fofona labiera malefaka ao afara aho mba hampahatsiahy ahy hitazona ny fofonaiko.
Ity no zavatra, heveriko fa infographic mahatsiravina ity. Raha ny fahitana azy dia tsy ampy ny milaza tantara amin'ny ankapobeny. Fanangonana hevitra tsotra fotsiny avy amin'ny lahatsoratra sy tatitra izay - Mino aho - fa hanao asa ratsy mahatsiravina amin'ny fomba fiasan'ny orinasa hampihatra paikady media sosialy lehibe hampidirana sy hananganana orinasany amin'ny Internet. Tsy voatsinjara ho an'ny B2B, B2C, haben'ny orinasa na sehatra indostria. Ugh.
Voalohany indrindra, ny tsy fisian'ny firesahana ny lafiny maha-olona ny fiaraha-monina mampihorohoro ahy. Ny fanentanana amin'ny marika dia tsy mitovy amin'ny fifandraisan'ny olombelona. Ny fahitana sary famantarana dia fanentanana amin'ny marika. Ny fanangonana fahefana sy fahatokisana an-tserasera, ny fanosehana mpitsidika bebe kokoa hiova finoana dia fifandraisan'olombelona izay mitaky fandraisana andraikitra ara-pientanam-po. Tsy mino aho fa ny fahatsiarovan-doko dia lafiny voalohany amin'ny fampiasana sehatra media sosialy, mino aho fa ny fananganana laza manokana. Matoky ny olona ny olona… ary ny sasany amin'ireny olona ireny dia miasa amin'ny marika. Tsy mifampiresaka amiko aho na mamaky ny hevitry ny marika amin'ny Internet, miresaka, mizara ary mividy amin'ny olona.
Tsy miraharaha ny fifamoivoizana aho. Tsy maninona ny fifamoivoizana raha tsy hoe mitondra valin'ny raharaham-barotra ny fifamoivoizana. Fihetsika sy fiovam-po mihoatra ny fifamoivoizana. Afaka mividy doka izay mitondra fijery an'arivony an-tranonkala iray aho, tsy maninona izany raha tsy hoe mifandraika, liana ary mitondra mankany amin'ny làlan'ny fiovam-po ny fifamoivoizana. "Ok" ny LinkedIn fa tsara ny Facebook? Ho an'iza?
Ny tontolon'ny media sosialy dia tsy momba ny sehatra, momba ny zavatra tsara vitany izy ireo ary tsy mahomby amin'ny fanampiana ny orinasa hifampiresaka amin'ny hetahetany sy ny mpanjifany. Raha tokony ho ny sehatra dia tokony hiresaka amin'izay atiny azonao zaraina sy amin'ny fomba ahafahanao mizara azy ity ianao, ary inona no azon'ny mpanjifa na ny vinanany atao. Azon'izy ireo atao ve ny miresaka momba izany? Azon'izy ireo atao ve ny manitatra ny hafatrao amin'ny mpihaino mifandraika kokoa? Azon'izy ireo atao ve ny mividy avy amin'izany? Ho avy sy handeha ireo sehatra, fa ny fitondran-tena ara-tsosialy no lakileny.
Tsy maninona ny fifandraisan'ny mpanjifa, faharanitan-tsain'ny mpanjifa manao. Inona no fahatsapana ny marikao amin'ny Internet? Ahoana no hamantarana anao raha ampitahaina amin'ny fifaninanana ataonao? Inona no ilain'ny olona eo amin'ny indostriao? Mitantana tsara ny lazanao ve ianao? Manompo ny mpanjifanao tsara ve ianao amin'ny toerana ara-tsosialy ifampizarana ampahibemaso ny fahafaha-manompo anao? Inona no ataonao amin'ny habetsaky ny angon-drakitra sy ny faharanitan-tsaina izay mivoaka momba ny vinavinanao sy ny mpanjifanao?
Tsy misy resaka momba finday (ivelan'ny fampiharana Instagram), an-toerana, ary doka ara-tsosialy? Ireo lafiny telo amin'ny media sosialy izay manome ny fivoarana, buzz ary vokatra betsaka indrindra? Ahoana ny fomba hampiasana ny sehatra tsirairay amin'ireo fitaovana sy kendrena hahomby? Tsy mino aho fa tsy misy fampahalalana momba an'io rehefa miresaka amin'ny tontolon'ny media sosialy ianao.
Tsy te hiditra amin'ny fomba nanaovan'ny SEO teo ambony latabatra akory aho. Raha te hijery infographic lehibe afaka manampy ny ezaka ara-barotra amin'ny media sosialy ianao, zahao Torolàlana ho an'ny fitetezana haino aman-jery sosialy, Ahoana ny fampiasan'ny orinasa ny media sosialy, Finday eo an-toerana ary Fitsipika 36 an'ny haino aman-jery sosialy ho an'ny fampahalalana ilaina sasany.
Tena tiako CMO.com - Mamaky fampahalalana sy torohevitra mahagagaga vitsivitsy ao aho isan'andro, saingy tsy manadino tanteraka ny marika ho an'ny mpivarotra antonony hampiasàny haino aman-jery sosialy ity infographic ity. Aza mikapoka latabatra ao amin'ny Photoshop fotsiny ary miantso azy hoe infographic. Makà a famolavolana infographic matihanina ary mitantara tantara iray izay azon'ny mpivarotra atao ny mahatakatra, mandany, mino ary mizara!
Azonao atao ny manamarina ity sary ity ary tsy miombon-kevitra amiko. Te hahafantatra anefa aho hoe inona ny torohevitra azo raisina avy amin'ity sary ity sy ny fomba hampiasanao azy amin'ny orinasanao.
Tags: Tontolo sosialy 2014infographic ratsyfanentanana marikacmofifandraisan'ny mpanjifaFacebookGoogle +Sary torohayfamolavolana infographicInstagramLinkedInPinterestsary ratsySEOslidesharefifamoivoizanaTwitterYouTube